I-PIVX Zerocoin (zPIV) iPhepha lobuGcisa | PIVX
I-PIVX Zerocoin (zPIV) iPhepha lobuGcisa
Kugcine ukuhlaziywa ngo-Oktobha 16 2017
I-PIVX yi-Bitcoin-based cryptocurrency yoluntu enengxininiso ekunikezeni indawo, ukugcinwa kwangasese kunye nokusetyenziswa kwehlabathi langempela. Isebenzisa ubuchule obunamandla obubonisa ubungqina bePakeko (i-Proof of stake protocol) kunye nenethiwekhi yesibini ye-Masternode yolawulo olubandakanya uluntu kunye ne-blockchain esekelwe yinkxaso-mali yenkxaso-mali yokuqinisekisa ukuzinza kwayo.
I-PIVX iqhubeka ngokuzama ukuphumeza inkqubo yolawulo olubhetele, ukuthengiselana kwangasese, kunye nokuqina ukuze uhlale kwisizukulwana esilandelayo.
Kwintetho le-layman, i-PIVX ngokuyinqobo ifom ye-intanethi yemali engasetyenziselwa ukudluliselwa kwihlabathi lonke ngoqhwanyaza kwe-yelihlo kunye nemali ekhoyo engekhoyo. Unokuguqula imali yakho kwi-PIVX kwiintlobo ezahlukeneyo kunye nokubamba ukufumana iimbuyekezo ezifana nomdla, ukurhweba ngokutshintshana ukuthenga ezinye iimali zemali okanye ukuthenga izinto okanye iinkonzo kwi-intanethi kwaye ungaxhunyiwe kwi-intanethi apho kwamkelwe.
Ayinayo okanye ilawulwa ngumntu omnye okanye intlangano kunye nenethiwekhi yayo ikhuselekile ngamawaka amaninzi emhlabeni jikelele ngabasebenzisi bayo.
Injongo ye-PIVX kukuba ibe yimali ehamba phambili yedijithali ekhawulezileyo, ekhuselekile, ekhoyo kunye nobucala.
UBUNGASESE BEMBHATALO KWI-CRYPTOCURRENCY
Izixhobo eziqhelekileyo kwiCryptoCurrency ezifana neBitcoin zinesimiso esaziwayo senkqubo yoluntu apho yonke intsebenzo ibonakala kwaye ilandelwa ngokuhlola i-block yayo. Oku kubangela umntu nabani na abanekhono lokubona konke ukuthengiselana kunye nezilinganisi kodwa kubaluleke ngakumbi idilesi ezihambelana nazo. Oku kuthetha ukuba imbali yalo mnikazi weedilesi yangaphambilini ibonakala kwidilesi yakho emva kokuba iinshirensi ziye zadlula kwi-blockchain kwaye zigqitywe kwidilesi yakho yekhredithi.
Idilesi ingabonakala ngathi ayichazwanga ngokupheleleyo kodwa ukuba wenza intengiso kunye nedilesi eyenziwa yintengiselwano kunye / okanye ezinye iinkonzo zorhwebo, sele uqhagamshele idilesi yakho engaziwayo nedilesi engakhokelela ekubeni ungubani.
Kwimiba emininzi, ukubonakaliswa okwangaphandle akunokuba yinkinga. Kodwa ingaba yinkathazo enzulu ukuba imali leyo ubambe idibaniswe nomlando ongafunekiyo okanye ukuba idilesi yakho ijoliswe ngamasela.
Ngokomzekelo, imali esayifumanayo ivela kwidilesi yomntu okanye inhlangano eqhuba imisebenzi engekho mthethweni kwaye yayisetyenziswe kwaye ilandelwa ngamagunya olawulo. Oku kuthetha ukuba unokubuzwa ngolwalamano lwakho nomnini wangaphambili wale mali esele uhlala nayo nangona uwamkele ngokusemthethweni nangenalo ulwazi. Oku kunokuthetha ukuba iinkozo ezinjalo ngembali zingabonwa njengexabiso elincinci kunezo mali zemali ngaphandle kokubangelwa ukungqinelana.
ISISOMBULULO SETHU= I-ZEROCOIN PROTOCOL (zPiv)
Ukuze unqobe lo mbandela, ngokuqala nge-v3.0.0 ukuhlaziywa kwekhredithi yomqobo ekhutshwe ngo-Oktobha 7 ngo-2017, i-PIVX ifake inkqubo eyaziwayo kakhulu ebizwa ngokuba yi-Zerocoin kunye nezithuthukisi zenkcubeko ezininzi ezivumela ukuba i-blockchain-level transaction ingabonakali ngendlela yokungahambi.
Sithi yi-zPIV, apho i-PIV iyunithi ye-PIVX kunye nesiqalo se-z yi-Zerocoin.
Yiyiphi i-zPIV ebonelela ngenkonzo yokuxuba i-protocol-level usetyenziso ngokusebenzisa ubungqina benkcazelo yokwazi ukukhupha ikhonkco phakathi komthumeli kunye nomamkeli nge-100% engaziwayo kunye nokungaqiniseki. Oku kuthetha ukuba nganye imali esetyenziswe ngokusetyenziswa kwe-zPIV ngoku i-100% ifumaneka njengokuba ingenazo iimbali ezinokuqhotyoshelweyo kubo.
Ukusetyenziswa kwe-zPIV kubhekiselele ukuba ukulinganisela kwakho kungabonakaliswa ukuze ugweme ukujoliswa kwamasela. Esi simpawu esiyingqayizivele kakhulu esingaba malunga nenye i-cryptocurrency njengamanje kwimarike.
Abagcini be-PIVX zPIV bafakwe nge-encrypted usebenzisa i-RSA-2048  umngeni owenziwe ngumngcipheko owenqabela imfuno yomqhubi wokusekwa othembekileyo kunye neendlela zokuthi akukho mntu owaziyo izinto. Oku kuthetha ukuba ubumfihlo bomntu wonke buqinisekiswa ngokusebenzisa i-zPIV.
Njengoko kubhaliweyo (SEP 2017) I-PIVX yiyo kuphela yoBungqina be-Stake cryptocurrency ukuba ifake isethi epheleleyo yeengcamango zeZerocoin kunye neenkqubo. Ngexesha elisekelwe kwi-original repository ye-libzerocoin eyadalwa ngabafundi bokufunda izixhobo zokufunda, ininzi yekhowudi ye-PIVX zPIV iyisiko, okwenza i-zPIV ikhetheke kakhulu.
I-Original Zerocoin Whitepaper: https://isi.jhu.edu/~mgreen/ZerocoinOakland.pdf
Ngokungafani nezinye iindawo zokukhusela ezikhoyo ezisetyenziselwa inkqubo ye-zerocoin-based, i-PIVX zPIV isebenzisa inkqubo yokuhlola i-accumulator esebenzayo kakhulu evumela i-zPiv ukusebenzisa inkqubo yokusebenzisa i-checkpoints equlethe zonke iimitha ezenziwe ngaphambi kokuba isetyenziswe i-zPiv, kunye ne- Inani elikhethiweyo lomsebenzisi we-zPiv mints ngaphaya kwekhawu lokujonga. Oku kuvumela ikhefu elikhulu leengqekembe kwi-accumulator ngelixa kunesidingo esincinci seenkomfa. Ukuphunyezwa kwe-PIVX ye-ZPiv kuvelisa ukusetyenziswa okuncinci kwemithombo kwaye kwenza ukuba imisebenzi yeZPIV ibe yinto ehamba phambili ngokukhawuleza kwiimarike namhlanje.
I-PIVX zPIV IINKCUKACHA ZEKHARITYHULAM
Ukuncitshiswa kokuncinci kwintengo yokuthengiswa kwemilinganiselo ngokwe-avareji ye-25% ngaphezu kwanoma yintoni na ukuphunyezwa kwangoku kwimimandla yokuvelisa (ukuqhubela phambili kwimisebenzi)
Ukuqinisekiswa ngokukhawuleza nokusebenza kwenethiwekhi
Ukusetyenziswa ngokuthe ngqo kwe-zPIV kwidilesi ye-PIVX
I-multiple Zerocoin denomination isebenza inokwenzeka kwintengiso enye
Ikhono lokuchitha imali echanekileyo kwaye ukhuphe utshintsho oluseleyo kwidilesi yePIVX okanye ngaphezulu kweZiviv.
UKUPHILA KWEMPILO YEMPILO YOKUSEBENZISA i-zPIV
i-zPIV inokufihla ibhalansi yakho yemali kwamehlo aqalazayo ekukhuseleni ekujoliswe kuyo.
Ngoko ibhalansi yakho ye-zPIV ayixhunyiwe kwidilesi ethile.
i-zPIV inokufihla imbali yokuthengiswa kweemali zithunyelwa.
Imithombo & iithagethi ezijoliswe kuyo ayibonakali ibenze kube yimfihlo, ikhuselekile kwaye ifumaneke.
I-zPIV engabonakaliyo yokuthengiselana iyakhawuleza ukuthumeleleka.
Kuthatha kangange-0.5 imizuzwana ukuya kwimitha kunye nemizuzwana engama-2.5 ukuchitha i-zPIV.
Ukuguqulwa ngokuzenzekelayo kwi-zPIV kunikwe amandla ngokungagqibekanga kodwa inketho yokudlulisa ngokucacileyo iyafumaneka.
Kuthetha ukuba unako ukuhlala uthumela ukuthengiselana ngokucacileyo xa kufuneka.
INDLELA YOKUPHILA KWI-ANONYMITY
Guqula i-PIV yakho kumaziko e-ZPIV. (I-Wallet auto-mints ezinye ngokungafihliyo)
Sebenzisa (thumela) i-zPIV yakho njenge-PIV kunoma iyiphi idilesi yangaphakathi okanye yangaphandle ye-PIVX
Ngokuyinqobo i-zerocoin protocol idibanisa zonke i-zPIV abantu babaye bayiguqula (batyhila) ukusuka kwi-PIV balance zibe zi- amahlelo kunye nokuwasebenzisa ukuthumela xa kuqalwe imali. Gcina ukhumbule ukuba ukuxuba akuthethi ukuba yonke i-zPIV igcinwe kwindawo ephakathi. Kunoko, Isikhokelo yoluntu (i-blockchain emiselweyo) igcina ingqalelo ukuba zingaphi i-ZPIV ezidalwa.
Xa ufuna ukuthumela (esetyenzisiweyo) kwenye ye-zPIV idilesi ye-PIVX, i-wallet yakho ithumela ubungqina besazi kwi-blockchain evumela ukuba i-zPIV iguqulwe kwi-PIV ize ithunyelwe kwikheli elijoliswe kuyo kwi-nyathelo elinye.
Ekubeni ukusetyenziswa kwe-zPiv kudala iimali zemali ezintsha xa u-spender angakunika ubungqina benkcazelo yokuba unayo imali kwi-pool eqokelelweyo (i-accumulator), imbali yokuthengiselana kwemali kwiidilesi zayo ezixutywanga ngaphambili ziye zahlulwa kwaye zenza iziphumo ezingenakubuyiselwa.
Ekugqibeleni, umfanekiso olula. Cinga nge-zPIV njenge-casino chips. Unika i-bill ye-dollar eyi-100 (i-PIV) kwi-cashier kwaye ufumana i-1x ye-$ 10, i-2x ye-$ 20, i-1x $ 50 dollar chips (i-zPIV). Oku kuthetha ukuba awunayo loo mali ye-dollar eyi-100 uye watshintshana kwaye kunokuba ube “ubungqina” ukuba usenayo i-$ 100. Ngoku xa ufuna i-dollar ezingama-50 kwakhona njenge-fiat (PIV), unikezela i-chips (zPIV) yakho kwi-cashier kunye ne-cashier uhambisa entsha ye-bill ye-bill ye-dollar ayi-50 engummkeli wokukhetha kwakho.
UKUTSHINTSHA KUNYE NENKQUBO YOKUPHATHA I-zPIV
Kulo mzekelo, uKirby ufuna ukuthumela i-PIV ku-Heidi usebenzisa i-protocol ye-Zerocoin ukubonakalisa ukuthengiselana.
Inyathelo ngeyinyathelo kwi-Minting Process
U-Kirby uqalisa isicelo soguqula i-960 zPIV.
Iprogram ye-Zerocoin iguqula i960 ye-PIV kwisixa esilinganayo se-zPIV, isebenzisa iindibano ezinkulu ze-ZPIV ezikhoyo.
1.Iziphumo, u-Kirby unikwe ulwazi olufihlakeleyo olubonisa ubunikazi bale mint (inombolo eyingqayizivele ye-serial esetyenziswa yiProtocol ye-Zerocoin ukulandelela ubunini beemali zesakhiwo se-zPIV).
Ibhalansi kaKirby ihlaziywa ngokufanelekileyo
Ngokwehla kwe-960 kwi-PIV, kunye nokwanda kwe-960 kwi-ZPIV.
UKirby ubona ukuba i-960 zPIV iqulethwe ngamacandelo alandelayo
ahlanganisiwe: 1x 500 zPIV, 4x 100 zPIV, 1x 50 zPIV, 1x 10 zPIV.
Inyathelo ngesinyathelo Ukuchitha Inkqubo
U-Kirby iqalisa ukuthumela i-960 zPIV kwidilesi ye-PIVX yeHeidi.
Iprogram yeZerocoin ifumana kwaye iqinisekisa ulwazi lwaka-Kirby oluyimfihlo olubonisa ubungqina. Xa sele isetyenzisiwe, ibhalansi yokuqala engenakukwazi ukusetyenziswa kwakhona.
iProjekti ye-Zerocoin idala i-960 i-PIV kwidilesi ka-Heidi ye-PIVX.
UHeidi ufumana i-960 i-PIV evela kumthumeli ongaziwa.
Ibhalansi kaKirby ihlaziywa ngokufanelekileyo – nge-960 ukwehla kwi-
Iinkcazo zeenkcazo yokuphula-phula kweMali
Ukuphucula usebenziso lwentsebenziswano ngexesha lokulondoloza izinga eliphezulu lokuxakeka, i-PIVX ifake isethi yamanani amaninzi asekelwe kwizixhobo zemali (i-PIV) ixabiso eliguqulwa libe yipenki yemali njenge-zPIV. (kufana nomzekelo we-casino chips ngasentla)
Amacandelo asetyenziswa yi-zPIV a: 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, no-5000. Ukusebenzisa le setethi yamacandelo kunika ibhalansi efanelekileyo yokusebenza lula, ukusetyenziswa nokukhuseleko. Indlela eyona nto yokunciphisa ukulandelelana iya kusebenzisa kuphela i-denomination (i-1 i-zPIV), nangona kunjalo, akunakulungele ukwenza oko, njengoko ukuthengiswa okukhulu kufuneke imali eninzi.
Ukusebenzisa isethi esikhulu kakhulu kunokunyusela ukulandelelana kwinqanaba elingakhuselekanga, ngoko ke kwalungiswa kwi-8 yeengqekembe zemali. Le setyathi ibonakala njengendawo ‘entle’ kuba ingabandakanyi zemali ezibhekwa njengezona ziphantsi okanye ziphakamileyo kwihlelo. Njengoko ixabiso le-PIV litshintshile, kuyacatshulwa ukuba siya kwandisa okanye sitshintshe eli setha ukuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi.
Xa uchitha i-zPIV yakho, uya kuba nobungqina bokuba unayo imali yelo daniso equka ezinye i-zPIV mints zaloohlelo.
Oku kuthetha ukuba konke ukuhlawulelwa kwe-zPIV kuya kwenziwa ngamanani apheleleyo (kunye nokutshintshwa kweemali ezidlulileyo) ukwenzela ukuba kusondele ukukwazi ukufana phambi kwe-ZPIV kwaye emva kwe-zPIV ivela kwiidilesi ezi-2 ezahlukeneyo ngelixa zininzi nezinye i-ZPIV zokuthengisa kwi-PIV zenziwe.
Iingcinga ezimva kolu-phulophulo
Xa uguqula okanye ukuchitha (ukuthumela) i-ZPIV, i-algorithi nganye nganye izakukhetha ngokuzenzekelayo iinkonzo ezisetyenzisiweyo.
Xa uchitha (ukuthumela) i-ZPIV kwidilesi ye-PIVX, ilandelayo i-algorithm izakubeka ngokuzenzekelayo iinkonzo ezisetyenziswa kumsebenzisi
1). Ukuba unomlinganiselo ochanekileyo uze uqalise ngeedomination enkulu kakhulu kwaye uhla uze ufikelele kwi-total
2) Ngaphandle koko: Ncitshitshisa idibanisa (a) fumana i-denomination ephezulu ngaphezu kwexabiso lemali (xa kunokwenzeka) kwaye uyisebenzise ukuba ikhona, (b) ukuba ayilunakuqala ngokuqala ngeedominations ezinkulu kwaye uhla uze ufike kwisixa nje ku funeka
3) Okanye: Nciphisa iNguqulelo. Ukuba akunjalo, zama ukufumana isixa esingaphezu kwezinto ezifunekayo ezinciphisa ubuninzi beemali ozenzayo kutshintsho
Ubumfihlo be-zPIV buba lusebenze ngakumbi xa kukho iinkonzo ezininzi ezichazwe kwimithombo eyahlukeneyo. Ngoko ukuqinisekisa ukuphumelela kwayo, i-PIVX isikhwama sinomsebenzi kwi-auto mint (guqula) inani elilinganiselweyo le-PIV ukusuka kwibhalansi ye-wallet kwi-zPIV ngaphandle kwemfuneko yokuguqula ngesandla.
Ukuzenzekelayo kuqala xa i-wallet / daemon iqaliswa, i-wallet ivuliwe (okanye ngokugcwele okanye ukugxina kuphela) kunye ne-blockchain iyavumelaniswa. Oku kuthetha ukuba ukuba isikhwama sakho sikhankanywe kwaye sitshiywe, isici sokuzenzekelayo asiyi kudibanisa. Xa isikhwama sivuliwe, asiyi kuthinta nayiphi na i-UTXO evalelwe njengalezo ezisetyenzisiweyo njengezibhambathiso zamasternodes.
Ipesenti epheleleyo: 10%. Ingatshintshwa nge-GUI okanye nge-option-line option `-zeromintpercentage = <n>` okanye pivx.conf `zeromintpercentage = <n> ‘akumele ibe ngaphantsi kwe-10%.
– isimo esingagqibekanga: senziwe. Unokucinywa (isb. For exchange) ukhetho-`ableableomint = 0` okanye pivx.conf `enablezeromint = 0`
Umsebenzisi ngoku unokuqwalasela i denomination ekhethiweyo yokuzenzekelayo nge-UI, ukhetho lomgca wolawulo–ukukhethiweyoDenom = <n> `okanye pivx.conf` kukhethiweyoDenom = <n> `<n> ingenye yeenkonzo ezikhoyo` 1/5 / 10/50/100/500/1000 / 5000` okanye `0` (kuthetha ukuba akukho khetho kukho konke kwaye vumela u-Automint enze nantoni na ayifunayo).
Ukuba akukho mali eyaneleyo ekhoyo kwi-denomination ye-Automint i-Automint ilinde de kubekho iindleko zemali ezaneleyo ezikhoyo.
Ngaloo bhloko entsha ezayo, yenza:
Khangela ukuba zininzi zemali ezinokuthi zifumaneke.
1.Lokhu kungabandakanyi iimali ezincinci kunye neengxowa-mali ezikhiyiwe (isb. Ukusuka kuma-masternodes)
Khangela ukuba zininzi iZerocoin / zPIV
3.Cinga ukuba iphesenti ingaphantsi kwepesenti ejoliswe kuyo
Ukuba ipesenti ingaphantsi kwepesenti ejoliswe kuyo, yenza:
Bala ukuba bangaphi i-PIV idinga ukuguqulwa kwi-zPIV, isb. 2015
Sebenzisa i-denomination encane (apha i-1000 PIV) kunye ne-mints 1000 zPIV
Hlaza uphinde uphinde uphinde ufumane i-zPIV ngokwaneleyo.
Umzekelo wam ngaphaya kwebhloko yokuqala ingenayo ibangele umdwebo we-1000 zPIV, olandelayo u-1000 zPIV, wesithathu ye-ZPIV kunye neyesine ye-5 zPIV (ecinga ukuba akukho PIV entsha engenayo iguqula inani elisezantsi le-PIV).
Isizathu sokusebenzisa i-denomination encinci esilandelayo, kwaye ukusebenzisa kuphela enye inkolo nganye kwibloko iyasebenza, iicawa azichanekanga azidingeki ukuba zityhuke zibe ngamacawa ngokucacileyo, kunye nento enye ingenziwa ngexesha elifanelekileyo.
Ngaphandle: ukuba inani elikhulu le-PIV lifuna ukutyunjwa, sisebenzisa i-NOT yethu enkulu yenkonzo ye-5000 ye-PIV kodwa i-6666 ye-PIV ukuba ibe nokunikezelwa kwamanye amahlelo (6666 = 5000 + 1000 + 500 + 100 + 50 + 10 + 5 + 1, zeziphi iindibano zethu ezi-8 ezikhoyo).
I-process yoku zala i-ziPIV ngeAutomatic
U-Kirby, ngaphambi kokuqaliswa kweProjekthi ye-Zerocoin, ine-balance ye-17,900 ye-
PIV. Unayo i-masternode, ngoko-10 000 i-PIV yokulinganisela kwakhe ibanjwe
kwidilesi edibeneyo kwaye ivalwe njengobuncwane. U-Kirby akayisebenzisi iCoin
Control ukuvala i-7,000 ye-PIV.
Iprotocol yeZerocoin isetyenziswe ..
Iprotocol ye-Zerocoin ilandelelanisa nganye dilesi ngokwemiqathango elandelayo:
Qinisekisa ukuba iimali zemali zivalelwe.
Ukuba iimali zingaphantsi, ziguqula i-10% ye-PIV kwi-zPIV.
Ukuba iintlawulo zemali zivalelwe, ungenzi nto.
UKirby ubona ukuba ukulinganisela kwakhe kuyehlile ngo-790 i-PIV, elingana ne-10% yeengqekembe zakhe ezingavaliweyo.
UKirby ubona kwakhona ukuba ibhalansi yakhe yanda nge-790 zPIV. Ekubeni engazange achaze nayiphi na inketho yeenqobo ze-ZPIV, ngoku unamaziko alandelayo afumaneka ukuchitha:
Sebenzisa iNqanaba loKhuseleko
Xa uchitha ii-zip zPIV, umsebenzisi uphelelwa ukuba angene kwiNqanaba loKhuseleko elikhethwa ku-1-100. Ngendlela engathanga ngqo, iParameter Level Level ivumela umsebenzisi ukuba akhethe ubuninzi beemali zokuthobela ukuthengiselana kwabo.
Inqanaba loKhuseleko lo-1, umzekelo, luza kuthatha zonke iingqekembe zemali kwi-blockchain phambi kokuba intimba yakho yongezwe kwi-blockchain, kwaye iza kuthi zongeze nayiphi na imali esetyenziswe kwiibhloko ezili-10 ezilandelayo. Inqanaba loKhuseleko lika-2 lenza into efanayo, ngaphandle kokufaka iibhloko ezilandelayo ezi-20 ezixabisekileyo. Inqanaba loKhuseleko lika-100 liya kwongeza inani eliphezulu lamaminithi ukuya kutsho ekupheleni kwe-blockchain.
Ephakamileyo iNqanaba loKhuseleko, ukubala ngaphezulu kunye nexesha eliza kuthatha ukuchitha. Nangona kuthatha ixesha elide, inqanaba lama-100 linconywa ukuthengiselana okudinga ukungaziwa.
Njengoko i-zPIV yenziwe ngamabandla azinzile, kuya kubakho amaxesha apho imali efunekayo ukuyichitha ayinakwenziwa ngamacawa akhoyo. Ngokomzekelo, ukuba unomnye we-1000 zPIV wenkolo kodwa ufuna ukuthumela i-985 ye-PIV kwidilesi, kuya kubakho umehluko we-15 ye-PIV oza kufunyanwa ngokutshintsha njengenguqu. Olu tshintsho lunokunyanzelisa ubumfihlo bentengiselwano njengoko kunokukhokelela kwidilesi yakho ekhoyo ukuba udibanise ngenguqu yakho inguqu kunye nezinye iiliti ze-PIVX.
Ukukhusela oku, kukho iindlela ezimbini ezinokusetyenziswa. Ikhetho lokuqala kukusetyenziswa kwesakhiwo esakhiweyo esitshintsha ngokuzenzekelayo utshintsho kwiZPIV. Oku kuya kuchitha i-zPIV kwimali efunekayo ye-PIV kwidilesi ekujoliswe kuyo, uze ulandele utshintsho olusele lwe-PIV e-zPIV. Le yindlela efanelekileyo kakhulu. Nangona kunjalo, inani lotshintsho olungaguqukiyo kwihlelo (i-denomination ephantsi kunazo zonke ikhona) iya kuguqulwa ibe yintlawulo.
Inketho yesibini kukukhupha utshintsho kwidilesi ephantsi yePIVX, ekushiya ukunyusa ulwahlulo lwe-Piv ukusuka kwi-Piv balance balance day. Olu khetho lunokukhokelela kwimpazamo kwaye alucebisi ukuba ukungabonakali kubalulekile ekuthengeni.
I-ZPIV Data Integrity
Yonke into ecacisiweyo ye-zPIV inxulumene nenombolo yecala ekhethekileyo egciniweyo kwi-wallet.dat kwaye kungekhona kwi-blockchain. Oku kuthetha ukuba xa iqumrhu elitsha le-zPIV lityunjwe, i-wallet.dat ifanele ixhaswe njengokuba isilondolozo sangaphambili asiyi kuba neenombolo zee-serial zeedominations ezandululweyo zPIV.
Inombolo yecala kunye nezinye iinkcukacha ezibalulekileyo ze-ZPIV zenziwe kwi-database (wallet.dat) ngaphambi kokuba umthengi ugqityiwe aze asasazwe kwinethiwekhi. Oku kunciphisa umngcipheko wokulahlekelwa iindibano ze-zPIV ezitsha ngokutsha ngexesha lesiganeko esingalindelekanga ngexesha le-zPIV, njenge-crash PC okanye i-intanethi yokuxhuma.
Ngenxa yoyilo lwendawo yolwazi lwendawo, kubalulekile ukuba i-wallet yakho ixhaswe emva kwayo yonke into entsha ye-zPIV ukuqinisekisa ukuba iinkcukacha zakho zeenombolo zamatyala zisesikweni.
Iinkcukacha zobuchwepheshe (v1.0)
Iimpawu eziphambili: Inkqubo yokuhlola yokuhlaziya
I-Cryptographic Accumulator: I-RSA-2048
i-zPIV IiDominominators: 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000
Ixesha lexeshana:> = 0.5 seconds
Sebenzisa ixesha:> = 2.5 seconds
Ubuninzi bodwa Ungasebenzisa umda: 35,000 i-PIV
Ubuninzi bodwa Ungasebenzisa umda wokubala wenani: 7
Isayizi sokuvimba: 2 MB (yayingu-1 MB ngaphambi kwe-v3.0.0 zPIV isikhwama)
Imirhumo (i-mint): 0.01 I-PIV ngayinye i-zPIV icawa.
Imali (iyichitha): Akukho mrhumo wokuchitha i-zPIV kwakhona kwi-PIV.
Inani elincinci le-PIV lokuqinisekisa elifunekayo ukuze lenze i-ZPIV: 6
Inani elincinci le-zPIV lokuqinisekisa elifunekayo phambi kokuchitha: 20
Izidingo ezongezelelweyo phambi kweZPiv zingasetyenzwa: ii-mints ezi-3 zongezwe kwi-accumulator emva kokuba eyakho ifakwe.
Ibhalwe ngu: jakiman, 4ml
Igalelo lobuchwepheshe nge: spock, presstab, fuzzbawls, mrs-x